आमाले दूध खुवाउँदा ३ महिनाकी छोरीको मृत्यु ! हत्या अभियोगमा आमा पक्राउ « गोर्खाली खबर डटकम
२०७९ जेष्ठ ६ गते शुक्रवार
आमाले दूध खुवाउँदा ३ महिनाकी छोरीको मृत्यु ! हत्या अभियोगमा आमा पक्राउ
२०७७ पुष ७ गते मङ्गलवार प्रकाशित
काठमाडौं। आमाले खुवाउँदा ३ महिनाकी बालिकाको मृत्यु भएपछि हत्याको अभियोगमा आमा पक्राउ परेकी छिन् । बालिकाको मृत्यु मेथाम्फेटामाइनको ओभरडोजका कारण भएको पाइएपछि आमालाई पक्राउ गरिएको हो । अटम ब्लान्सेट नामकी ३१ वर्षकी ती महिलाले आफूले मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स र गाँजा सेवन गरेर छोरीलाई दूध खुवाएको स्वीकार गरेकी छिन् । बालिकाको अटोप्सी रिपोर्टमा उनको शरीरमा उच्च मात्रामा मेथाम्फेटामाइन पाइएको थियो ।
द सनको रिपोर्ट अनुसार अमेरिकाको लुसियाना राज्यको मारेरोमा ती बालिका हलचल नगरेको जानकारी पाएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरु घरमै पुगेका थिए । स्वास्थ्यकर्मीले घटनास्थलमै उनलाई मृत घोषित गरेका थिए तर मृत्युको कारण थाहा हुन सकेको थिएन । अटोप्सी रिपोर्टमा बालिकाको शरीरमा ड्रग्सको मात्रा पाइएको थियो । ११ डिसेम्बरमा ती बालिकाको मृत्यु हत्या भएको ठहर गरिएको थियो । पछि सोधपुछका क्रममा ब्लान्सेटले आफूले मेथ र गाँजा सेवन गरेर छोरीलाई दूध खुवाएको स्वीकार गरेकी थिइन् ।
अधिकारीहरुले ब्लान्सेटको घरमा दुवै लागूऔषध पनि बरामद गरेका छन् । महिलालाई सेृकेण्ड डिग्री हत्याको अभियोग लगाइएको छ । उनलाई अदालत कहिले उपस्थित गराइनेछ भन्ने प्रस्ट छैन । ड्रग्सका कारण कुनै बच्चाको मृत्यु भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि इण्डियानामा पनि एक महिलाले मेथ सेवन गरेर छोरालाई दूध खुवाएपछि २ महिनाका छोराको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि उनलाई पनि पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो ।
जुन सुकै उमेर या महिला पुरुष होस्, यति टिप्सले सुन्दरतामा अचम्मै निखार आउँछ…
आफैले पोष्ट गरेको भिडियोका कारण फसीन् नायीका प्रियंका कार्की, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बयान लिँदै
मिर्गौलाको उपचार गर्ने खर्च अभावमा घरमै लडिरहेकी छन् पुष्पा